ေမြးေန႔ ပိုင္ရွင္ေလးမ်ား အေၾကာင္း - SonSon LinLin
HomeKnowledgeေမြးေန႔ ပိုင္ရွင္ေလးမ်ား အေၾကာင္း
October 21, 2021 sonsonlinlin Knowledge 0
မွေးနေ့ ပိုင်ရှင်လေးများ အကြောင်း
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1 ရုပ်တည်ကြီးနေ တတ်ပေမယ့်..တကယ်ခင်သွားရင်လဲသူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲမှ ာမျက်နှာအပြောင်ဆုံးကသူပဲ..အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ်…ရတာမလိုလို တာမရတွေလေ…..
အစွဲလန်းလဲကြီး တယ်ချစ်ပြီဆို တခြားလူနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူးအချောကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းရှိတယ်ညို့အား အပြင်းဆုံးက အသံ (အသံလေးကြား ဖူးရုံနဲ့တင် စွဲလန်းသွားစေ တာမျိုး)
အထာကျတဲ့ နေရာမှာ No. 1တခုခုဆို အရမ်းပြတ်သား တယ်ပြောစရာရှိရင် ဘယ့်သူ့ကိုမှာ အားမနာ တတ်ဘူးမှန်တဲ့ ဖက်က ရပ်တည် တာမျိုးပေါ့ ရန်လိုတဲ့လူ နဲနဲများတယ် ဒါမယ့်ဘသူ့ကိုမှ သိပ်ဂရုမ စိုက်တတ်ဘူး ဘလိုအခြေနေ ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိတယ်
အပေါင်းသင်းဆိုလဲ ရွေးပြီးပဲပေါင်းတယ် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော သိပ်မထားတတ် ဘူးအတုယောင်တွေကို မုန်းလို့ တဲ့လေညို့အားအပြင်းဆုံးက ခန္ဓာကိုယ်(ယောကျာ်းလေးဆို အရမ်းခန့်ပြီး မိန်းကလေးဆိုလဲ အချိုးအစားကျတယ်..ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်)
ဆရာကြီး လုပ်တဲ့နေရာမှာ No.1ပြောသာပြောတာနော် သြဇာက အရမ်းညောင်းတယ်လူချစ်လူခင်လဲပေါတယ် လူတိုင်းကလဲယုံကြည်တယ် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသတဲ့ သူတွေပေါ့ ဒါမယ့် သိပ်မပွင့်လင်းတော့ ပျော်တယ်လို့ပဲ
ထင်ရတာအမြဲ တမ်းလိုလို အထီးကျန်နေတတ်တယ် မိသားစုဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပစ်ပယ်ခံရတဲ့ အချိန်က များနေတတ်တယ် ညို့အားအပြင်းဆုံးက မျက်လုံး(အကြည့်နဲ့ညို့တာနော်…သူတို့နဲ့တွေ့ရင် မျက်လုံးတွေကို သတိထား အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတာ..)
ရူးတဲ့နေရာမှာ No.1 တလောကလုံး သူတို့နဲ့တည့်, တဲ့လူ မရှိသလောက်ပဲစိတ်ရင်းကောင်းတယ် အပြောဆိုးတယ ်စိတ်ဆိုးတုန်းလဲ ခနပဲ ပြီးရင် ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါင်းသင်းရ ခက်တဲ့သူတွေ အဖေကလွဲရင် တမိသားစုလုံးနဲ့
မျက်နှာကြော မတည့်ဘူးဘလောက် အသက်ကြီးကြီး ခလေးစိတ် ကမပျောက်ဘူး ညို့အားအပြင်းဆုံးက ဆံပင်ပုံစံ(မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ယောကျားလေးဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေက ဆံပင်ကို အရမ်းတန် ဖိုးထားတာ)
ချန်း တဲ့နေရာမှာNo.1 -ဘာလုပ်လုပ်လွဲတယ် သေချာခိုင်းလေလွဲလေပဲ -တခုခုဆို အမြဲအဆူအငေါက်ခံရတယ်….စိတ်ရင်းကောင်းတော့ သူငယ်ချင်းတော့ပေါတာပေါ့ ဒါမယ့်အတုအစစ် သိခွဲတတ်တော့ သူငယ်ချင်းကြောင့်ပဲခနခန ချောက်ချခံရတဲ့သူတွေအယုံလွယ်တယ် ၊ပိန်းတယ်ကိုယ့်ဖို့ ဘယ်တော့မှမကြည့်တတ်ပ်မဘူးအနစ်နာအရမ်းခံတတ်တယ်ညို့အားအပြင်းဆုံးက မျက်နှာ ( သေချာကြည့်မိလေ လှလေပဲ..)
လေပွားတဲ့ နေရာမှာ No.1အရမ်းစကားများတယ် အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးကို တတွတ်တွတ်ပြောနေတာ….ဒါမယ့် အကုန်လုံးကို သီးခံပြီးပေါင်းတတ်တယ် ရောက်တဲ့နေရာမှာ ချစ်မယ့်လူပေါတယ်….
ပြသနာတော့ ခနခနဖြစ်တယ် ပြသနာက မလာရင်တောင် သူတို့ကသွားရှာတာ အယုံလွယ်သလောက် သူတို့ဘေးမှာလဲ လိမ်မယ့် လူတွေချည်းပဲ….ညို့အားအပြင်းဆုံးက တော်ကီ..( အပြောတွေအောက်မှာ မျောသွားအောင် ကိုစွမ်းတာ သတိထားပြီးသာ ဆက်ဆံ.)
ယုတ်မာတဲ့ နေရာမှာ No.1 အစစ အရာရာ ဗိုလ်ကျတယ် လိုချင်တာမရရင် တလောကလုံး စိန်ခေါ်ဖို့လဲ ဝန်မလေး ဘူးနေရာတကာ စိတ်ကြီးတတ်တဲ့ ဒေါသအိုးလေးတွေ ဒါမယ့် စိတ်ရင်းကောင်းတယ် အပေါင်းအသင်းမင်တယ် ….
အနစ်နာခံ တတ်လို့လဲ ချစ်မယ့်လူပေါတယ် ထင်တိုင်းကြဲနေ တတ်ပေမယ့် အဆင်မပြေတာတွေ ခနခနကြုံနေ တတ်တယ်။ ဘယ့်သူ့ကိုမှလဲ သိပ်မယုံဘူး သူတို့အနားလာတဲ့လူတိုင်းကို သံသယ မျက်လုံးတွေနဲ့ပဲ ကြည့်တတ်တယ် ….
ညို့အားအပြင်းဆုံးက အပြုံး( အထူးသဖြင့် သွားတက်၊ ပါးခွက် တွေပါနေတတ်တယ် သူတို့ပြုံးနေရင် မျက်နှာသာ ရအောင်လွှဲ အပြုစားခံရ တာထက် ဆိုးတယ်..)မူရင်းပို့စ် အားကရစ်ဒစ်ပေးပါတယ် ။မူရင်းပို့စ် အားကရစ်ဒစ်ပေးပါတယ်